KNOWLEDGE Archives - Page 17 of 25 - XYZ NEWS
ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ် ( ၁၀ ) စီး
တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေဟာ မြေပြင် ဝေဟင်ပစ်မှန်တွေအတွက် လက်နက်အမျိုးမျိုးတပ်ဆင်ထားပြီး လေတပ်အတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်။ လူသယ်ပို့မှု၊ နေရာမရွေးသွားလာနိုင်မှုစတာတွေကြောင့် မရှိမဖြစ်ဆိုပေမဲ့ နိုင်ငံတိုင်း တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေမပိုင်ဆိုင်ပါဘူး။ အဓိကကတော့ စျေးအလွန်ကြီးတာပါ။အခု ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံး တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ် ၁၀မျိုးကိုဖော်ပြပေးမှာပါ။ ၁၀။ Bell AH-1 Super Cobra …
February 20, 2020 By Editor ARMYY
အာရပ်နိုင်ငံတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံဟာ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်တောင်ချမ်းသာလဲ ဆိုရင် သူတို့နိုင်ငံမှာတောင်းစားတဲ့ သူတောင်းစားတွေရဲ့ တစ်လဝင်ငွေဟာ နိုင်ငံအများစုမှာ ပညာရှင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေရဲ့ တစ်နှစ်ဝင်ငွေထက်တောင် များတယ်ဆိုရင် သင်ယုံနိုင်ပါ့မလား..? တောင်းစားတဲ့သူတွေဟာ ဒူဘိုင်းကို တရားဝင်ခရီးသွားဗီဇာနဲ့ ဝင်ရောက်လာကြပြီး …
February 2, 2020 By Editor KNOWLEDGE
ကိုက်တတ်တဲ့ခွေးနဲ့ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရရင် မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင့်သင့်တဲ့ အချက် ( ၅ ) ချက်
နေ့တိုင်းလိုလို လမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ လမ်းဘေးခွေးတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာ အန္တရာယ်ရှိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုခွေးတွေကတစ်ခါတစ်လေမှာ မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အပြအမူမျိုးတွေ ပြတာမျိုးရှိပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်းအရမ်းကို ရန်လိုပြီး မဖော်ရွေတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လူသားတွေရဲ့ ဘဝတွေကို သိသာတဲ့ ခြိမ်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီသတင်းမှာတော့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ …
February 2, 2020 By Editor KNOWLEDGE, UNUSUAL
ယောကျာ်းတွေကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့ ဂရိဒဏ္ဍာရီထဲက မြွေဟောက်ဆံပင်နဲ့ မီဒူဆာ ဇာတ်ကြောင်း
မီဒူဆာ အကြောင်း Medusa ကတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကြားဖူးကြတဲ့ဂရိ ဒဏ္ဍာရီထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ ။ သူ့ကို စစ်သည်တော်များစွာက သတ်ဖြတ်ပြီးသူ့ခေါင်းကိုဖြတ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ် ဒါပေမယ့် အားလုံးကျရှုံးခဲ့ပါတယ် Zeus ရဲ့သားတော် Perseus ကလွဲရင်ပေါ့ Medusa ရဲ့ပုံစံ …
​​မော်​​တော်​ကားကိုမောင်းနှင်သူများဟာ မောင်းနှင်နေသည့်ကားကို သင့်တော်စွာ ဂရုစိုက်ရမည်ကို မစဉ်းစားမိကြပါဘူးသို့သော်လည်း အောက်ဖော်ပြပါ အသုံးတည့်လွယ်ကူမည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာပါက ကားအတွက် စျေးကြီးသောဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကို လုပ်စရာမလိုပဲ ကားကို အထိအခိုက်မရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ၇. တာယာလေဖိအားကို အရမ်း နည်းလွန်း …
၁။ New Jersy မြို့ ဤ မြို့ က လူဦးရေ အင်မတန် ထူထပ်ပြီး ပြေးပေါက်မရှိသော နေရာ တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီး virusပြန့်ပွားမှု အမြန်ဆုံး နေရာ တစ်ခုလည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ။ထို့ကြောင့် ဒီ နေရာက …